Kufamba muWheelchair | Karman® Mawiricheya
Kufamba kuburikidza hwiricheya Zvinowanikwa Cities
Wese munhu anoda famba uye kunyangwe iwe uri mu wiricheya haunzwi musiyano nekuti iwe wakaramba wakanyarara ufambe nyika kana nyika yako chete. Kuenda unogona chete kukuitira zvakanaka zvinokubatsira kuwana zvinonakidza zviitiko iwe zvaunogona kuwana kunze kweguta rako. Tichaisa maguta mazhinji anozivikanwa ari wiricheya inoshamwaridzika maguta uye zvinonakidza kushanyira. Guta rega rega pane rondedzero iguta rakakura uye richasiya mhedzisiro inogara ichizoda kuti iwe urambe uchidzokera kumashure. Ita shuwa kuti iwe unotora mimwe mifananidzo uye tora imwe mari kuti uwane zvimwe zvisingakanganwike zviitiko.
Kana iwe parizvino uchigara muUnited States saka mazhinji eaya acharidza bhero. Iwe unogona kutogara mune rimwe remaguta aya kunyangwe uchizivikanwa kwazvo. Sezvo ichifamba mukati meUnited States haudi pasipoti uye chete ID yemubatanidzwa. Kana iwe uchipokana kuti utore mota kana ndege saka unofanirwa kutora mota nekuti unogona kumira nemaguta munzira yekuenda kwako. Nenzira iyi iwe unokwanisa kuyambuka mamwe maguta ezve runyorwa uye wosvika kune yako yekufamba chinangwa. Mamwe maguta iwe aunofanirwa kufunga nezvawo ndeaya pano.
Guta rakakosha munhoroondo yeAmerica
Vashanyi zvinokwezva, goridhe gedhi bhiriji, Alcatraz, uye Chinatown
Iyi nyika inoisa iyo kuwanika pawiricheya mureza
Hollywood chiri chihombe chikuru ivo vachiri nemabhichi, mamuseum, varaidzo, uye mitambo
"Sin Sin" haingokwezvi vanhu chete asi inokwezvawo vanoshandisa wiricheya nekuda kwesarudzo dzayo dzisingaperi dzevaraidzo
Nzvimbo yekuzvarwa yaMartin Luther King Jr, Olimpiki yezhizha yakaitirwa pano, uye guta rakanaka rine zvinoshamisa zvinoonekwa
Inozivikanwa se "guta rine mhepo" Chicago ine zvakawanda zvinokwezva uye yakanaka Lake Michigan
Kufamba kutenderera pasirese
Kana iwe uchida kufamba-famba pasirese zvinogona kutonyanya kushamisa nekuti iwe uchawana ruzivo rwetsika dzakasiyana tsika dzausingawanzo kuratidzwa. Chikafu chega chaizoita kuti chikoshese nekuti chichave chakasiyana mune dzimwe nzvimbo. Ivo havape mhenyu octopus munharaunda yako yeMcDonald's izvozvi vanozviita here? Tichakupa rondedzero yemaguta anoshamisa ekufamba kutenderera pasirese ari mawiricheya nzvimbo dzekufamba kuenda.
YeEurope inonyanya kufararira uye zvimwe zvakakosha maguta anotenderera zvakanyanya
Ivo vane akanakisa mamiziyamu uye hunyanzvi muguta guru, Madrid.
Wese munhu anorota zvekuenda kuParis asi iwe unofanirwa kuzviita kuti zviitike. Ivo vane anoshamisa maguta magetsi anongofema kutora.
Iye zvino zvaunenge uine zano rekuti iwe unoda kufamba kupi kuti utange kudaidza zvakasiyana airways uye tanga kutora iyo mitengo Matikiti ekuaenzanisa kana iwe uchida kuenda nendege. Kana iwe ukafamba mukati meUS saka iwe unofanirwa kufunga kuenda mumotokari kana kunyangwe chitima uye kusimudzira ruzivo. Pas nemaguta akati wandei uye edza chikafu ipapo wosangana nevamwe vanhu vatsva.